कसरी मनाइन्छ गाईजात्रा ? - गाईजात्रा - प्रकाशितः श्रावण २४, २०७४ - साप्ताहिक
कसरी मनाइन्छ गाईजात्रा ?
वर्षभरि निधन भएका आफन्तहरूको स्मरण गर्दै मृतकका परिवारले सम्भव भएसम्म घरको सबैभन्दा कान्छो सदस्य (छोरा भए छोरा नभए छोरी) लाई सिंगारेर गाईको स्वरुप मान्दै तोकिएको ठाउँ (काठमाडौंमा वसन्तपुर, भक्तपुरमा दरबार स्क्वायर, ललितपुरमा मंगलबजार) मा भिक्षा माग्दै परिक्रमा गराउँछन् ।
यसरी भिक्षा माग्ने क्रममा कतिपयले गाईलाई नै सिंगारेर समेत परिक्रमा गराउँछन् । यस्ता भिक्षुकहरूलाई श्रद्धालुहरूले दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दही, द्रव्य आदि दान गर्छन् । यसमा दान गर्दा पनि दाताको मृतक पूर्वजहरूले वैतरणी तर्न सक्ने विश्वास गरिन्छ ।
प्रकाशित :श्रावण २४, २०७४
चर्चित पुस्तकहरू कसरी लेखियो ?
अमेरिकामा तीज यसरी मनाइन्छ
तीजलाई कसरी स्पेसल बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
पाल्पामा जेरी र राजा राजेन्द्र
ओलीका उखान टुक्काहरूको कलेक्सन रमाइलो